ILogo yeNsimbi enzima: Iingcamango zeLogo yeNsimbi enzima kunye neMizekeliso | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | 01/05/2022 15:00 | Idizayini yeMifanekiso, ngokubanzi
Kukho uhlobo lomculo oluhamba ngentsholongwane amashumi eminyaka. Uhlobo olukuthumelela ngomnxeba kwihlabathi lamandla ombane kunye neemvakalelo. Bambalwa kakhulu abayaziyo imbali yayo, ke ngoko, uninzi lwabantu abazinikele kuyilo lwegraphic baya kuqonda ukubaluleka konxibelelwano olukwaziyo ukuvelisa ngaphezulu nangaphantsi kwentsimbi enzima.
Kule posi, asiyi kukwazisa kuphela kwimbali yentsimbi enzima, kodwa siguqule iitafile ukuba ziprojekthi kuwe. ukuba nokwenzeka ukuba ungayila eyakho ilogo yentsimbi enzima ngokugqibeleleyo, ngaphandle kokushiya nayiphi na inkcukacha, kwaye ngaphezu kwayo yonke into, enobugcisa obuninzi kunye nobuntu.
1 Intsimbi enzima: yintoni
2 Ilogo yentsimbi enzima: izimvo kunye neengcebiso
2.1 Inyathelo 1: Phanda
2.2 Inyathelo 2: Sketch
2.3 Inyathelo lesi-3: Lungiselela ilogo yakho
3 Imizekelo yeelogo zentsimbi enzima
3.2 UVan Halen
3.3 Iled zeppelin
3.4 Umsebenzi wentsimbi
Intsimbi enzima: yintoni
Umthombo: uMyalelo weHlabathi
I-Heavy metal ichazwa njengenye yeentlobo ezininzi zomculo ezikhoyo namhlanje. Kodwa ngakumbi, luhlobo oluye lwakhuthazwa kwimbali yalo ngezinye iintlobo. njengeblues rock, 60s acid rock, kunye nomculo omninzi weklasikhi Uye wazi kakuhle isimbo sakhe somculo.
Olu hlobo lwazalwa kwaye lwaqala ekupheleni kweminyaka yee-60, lwaphenjelelwa kakhulu ngamaqela ahlukeneyo aphumelele ukwazisa kunye nokuthatha olu hlobo phambili kwaye aludlulisele kwizikali ezinkulu kunye nezigaba. Luhlobo lomculo Yayibalasele kakhulu kumazwe anjengeUnited Kingdom neUnited States. Kwade kwayiminyaka yee-80 xa intsimbi enzima yaqala ukufumana udumo oluyifaneleyo.
Ezinye zezixhobo ezigqamayo kwintsimbi enzima zezi: ibhetri edla ngokuba ne-double bass drum edityaniswe ukunika amandla amaninzi kunye namandla kwisandi, i-bass, isiginkci sesingqisho, isiginkci esizimeleyo kunye nekhibhodi. Ezi zixhobo zibaluleke kakhulu, ekubeni ziyingxenye yesimo esipheleleyo kunye nobuntu bentsimbi enzima.
Uninzi lomfanekiso weprojekthi yentsimbi enzima, iphuma kumaqweqwe amaninzi ecwecwe lakhe, iilogo nazo ziyizona zinto ziphambili zomdla, apho kwakhona kongezwa iqonga, iimpahla ezidla ngokunxiba amagcisa kunye neemvumi ezininzi, ukumela iqela ngale ndlela kunye nezinye iividiyo zomculo eziye zenziwa kuyo yonke imbali, kwaye oko kuye kwaduma kakhulu, ngakumbi ngenxa yobugcisa.
Enye into ebalaseleyo kwintsimbi enzima Ngaba ziinwele okanye iinwele zamagcisa, uninzi lwazo lusebenzisa iinwele ezinde, ezithe tye nezigqithisile. Yenye yee-icon ekufuneka igcisa ngalinye lentsimbi enzima libe nayo. Oku kuthatyathwe kwi-hippie subculture uninzi lwabo belusamkela kwimbali kwaye ngoku ibe luphawu olukhulu.
Okokugqibela, ikwabalaselisa inyani yokuba ngelo xesha, uninzi lwabaqambi kunye namaqela, waqala ukusebenzisa izimonyo njengendlela yokubonakalisa emfanekisweni wakhe eluntwini oluzimiseleyo. Into eyothusa kakhulu ngelo xesha.
Ilogo yentsimbi enzima: izimvo kunye neengcebiso
Inyathelo 1: Phanda
Into yokuqala omawuyenze phambi kokuyila ilogo kukwenza uphando lwakho. Ngaphambili siye sachaza ukuba yintoni le ntlobo kunye nezinye iimpawu zayo ezimele kakhulu. Nangona kunjalo, Kubalulekile ukuba siphinde siphonononge neminye imiba, efana nembali yayo. Siyazi ukuba yintoni intsimbi enzima kodwa hayi apho ivela khona kwaye yavela njani kuyo yonke iminyaka ye-60 ukuya kuma-80s. Kwakhona kubalulekile ukucacisa ukuba zeziphi izinto ezibaluleke kakhulu xa sithetha ngodidi oluye lwazi ukuba luzahlula njani kakhulu. kakuhle, abanye.
Ngesi sizathu, kubaluleke kakhulu kwaye kunomdla ukwenza uphononongo lokuqala lweelogos esiwaziyo amaqela athile. Umzekelo Metallica. Ukufunda ilogo yeMetallica kulula kakhulu. Xa sithetha ngokufunda okanye ukuhlalutya ilogo esithetha ngayo, Jonga kwangaphambili kwaye uzenzele ezethu izigqibo kwizinto ezibalulekileyo ezifana nokuchwetheza: Ngaba basebenzisa i-serious or more lively typography?Iimibala imnyama okanye ikwabelwana ngayo kwaye iyachasaniswa neminye ekhanyayo? njl. Ngaphambi kokuba uqale, Kuyimfuneko ukuba ube nolwazi oluphangaleleyo oluya kukunceda kwezinye izigaba.
Njengomgaqo oqhelekileyo, ii-logos zetsimbi enzima zidla ngokugqitywa yimithunzi emnyama kakhulu: emnyama kunye negrey. Ii-typefaces zihlala zinika umbane kakhulu, zivelisa imvakalelo yamandla kunye namandla ngaphezulu kombukeli. Ke ngoko, kuya kufuneka ukhethe ifonti kunye nombala otsala umdla omkhulu.
Inyathelo 2: Sketch
Isigaba sokuzoba sesona sigaba sikhulu kuzo zonke. Ukusuka apha zonke iingcamango zokuqala ziqala ngendlela yokudweba ukuba ingqondo yethu isebenza ngokukhawuleza kwaye, ngenxa yoko, iinkqubo ngokukhawuleza. Okokuqala kufuneka sibe nesikhokelo okanye isalathiso sento umxhasi ayifunayo, kule meko, ukuba umxhasi siziqu zethu, Kuya kufuneka siqhube uhlobo lwengcaciso kunye nezikhokelo okanye iinjongo esifuna ukumisela loo logo.
Nje ukuba sicacelwe malunga nendlela esifuna ukumela ngayo uphawu lwethu, kuya kufuneka siqhubeke nokuzoba. Ukwenza ngendlela ecocekileyo kakhulu, Sicebisa ukuba ulandele iindlela ezintathu ezahlukeneyo, iindlela luhlobo lokuphuma oluneempawu ezahlukileyo kodwa zonke, zama ukumela into oyifunayo. Indlela yokuqala inokuba kukusebenza kuphela nge-typography, ngaphandle kokongeza nayiphi na enye into. Indlela yesibini inokuba kukudibanisa into ebonisa ukuba ivela kwezinye, kwaye eyesithathu inokuba ngomnye umba.
Inyathelo lesi-3: Lungiselela ilogo yakho
Nje ukuba sibe nemizobo eyenziweyo kwaye sikhethe enye, kubalulekile ukuba siyinike inkangeleko eyinyani. Oku kuxa siyifaka kwidijithali kwezinye iinkqubo ezifana ne-Illustrator okanye iPhotoshop. Kubalulekile ukuba i-logo inesiphumo esisebenzayo kwaye inesimo sengqondo kunye nomlingiswa welogo. Kule meko kuya kuba nomdla ukongeza isithunzi esincinci kwi-typography ukuqinisa ukubizwa kweqela.
Imizekelo yeelogo zentsimbi enzima
Umthombo: Amanqaku ayi-1000
Ilogo yeKiss edumileyo yenye yezona zibalaseleyo kwimbali yentsimbi enzima. Kangangokuba, ibe ngumqondiso wolu hlobo olubandakanya amawaka kunye namawaka abaphulaphuli. Injongo yoyilo lwayo yayikukubonisa inkangeleko yombane. Into yokuba umyili wayeneengxaki ezinkulu ekubeni uyilo lwakhe lwalufana kakhulu nalolo lwalusetyenziswa ngexesha lamaNazi. Oko kwanyanzeleka ukuba bayiguqule.
Ibhawuti yombane yinto eqhelekileyo kwezinye iilogo, kuba ibonelela ngombane kunye namandla, imiba emibini enxulumene kakhulu nolu hlobo.
Ilogo yeVan Halen yenye yezona zinto zibalaseleyo kuzo zonke ezikhoyo kwintsimbi enzima. Le yenye yezona zinto zithe zatshintsha kakhulu, nto leyo eyenza ukuba ibe liqela elidumileyo phakathi kwabaphulaphuli balo. Utshintsho lokuqala olwenzekayo lwalunento yokwenza nokutshintsha kweemvumi ezimbini eziphambili zeqela, eyaphoqeleka ukuba ifake i-V yokuqala kunye ne-H kwi-logo. Kukho iialbham apho ilogo yasentsomini isagcinwe khona.
Ngokungathandabuzekiyo elinye lamaqela ukuba, ukuba ubuza umntu ngayo, baya kukuxelela ukuba bayazi ngokugqibeleleyo. Lelinye lamaqela esinyithi esinzima, kwaye ayimangalisi nje ngeengoma zayo ezininzi kunye neealbham, kodwa kunye noyilo lwayo lwelogo.
Ilogo ibonisa umfanekiso we omnye wemifanekiso eqingqiweyo eyenziwe ligcisa laseMelika uWilliam Rimmer, nangona uninzi lwabo bangqonge eli qela belinxulumanisa nomfanekiso ka-Apollo, uthixo wamaGrike omela ukukhanya nomculo.
Kwaye ukuphelisa olu luhlu lwemizekelo, omnye umzekelo obalaseleyo awukwazanga ukulahleka, njengeqela elidumileyo lentsimbi enzima, i-Iron Maiden. Ilogo ifana kakhulu nelogo yeMetallica xa uyijonga nje. Ukwenza oku, basebenzise i-typography enika amandla kunye neyothusayo. Bakwasebenzise uluhlu lwemibala yenkampani ebomvu eme phandle kancinci kwilogo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, uyilo lusebenza kakhulu, kwaye ngokutsho kwabanye abalandeli kunye nabameli, umyili waphefumlelwa yipowusta yeVic Fair evela kwifilimu eyaziwayo "Indoda eyawa emhlabeni".
Intsimbi enzima luhlobo oluye lwathandwa kakhulu kwiminyaka yakutshanje. Enyanisweni, ayanda amaziko anika imbeko kolu hlobo lomculo, kukho neendawo apho kuviwa olu hlobo lomculo kuphela.
Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona nto ibalaseleyo, njengoko siye sakwazi ukuqinisekisa, ziilogo okanye uyilo lwamaqweqwe ecwecwe. Uyilo oluthi, ekuqaleni, lujike olu hlobo lube yindlela entsha yokwenza ubugcisa.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi ngolu hlobo lomculo kwaye ngaphezu kwako konke, ukuba ukhuthazwe zezinye iilogo esikubonise zona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » uphawu lwentsimbi enzima